Ngwa 10 kachasị mma iji gụọ akwụkwọ na android | Gam akporosis
Ọ bụrụ na anyị chọrọ mee ka umuaka anyi mee omume igha ihe dị ka ntụgharị na ọ bụghị dị ka ọrụ dịịrị ebe ọ bụ na ha pere mpe, n'ọtụtụ oge, anyị ga-adabere na teknụzụ, ebe ọ na-enye ha ohere ịme ọrụ a ka ọ ga-ekwe omume nke ga-enyere ha aka kwa ụbọchị.
Ọ bụghị mmadụ niile nwere mbadamba ụlọ, yabụ iji ngwaọrụ a abụghị nhọrọ n'ọtụtụ ụlọ. N'ụzọ dị mma, smartphone na ngwa ịgụ akwụkwọ karịrị ihe zuru ezu. Ọ bụrụ na ị na-achọ ngwa iji gụọ akwụkwọ n'efu na gam akporo, n'okpuru anyị na-egosi gị nke bụ 10 kachasị mma na Storelọ Ahịa Play.
Otu akụkụ nke anyị kwesiri iburu n'uche mgbe anyị na-ahọrọ ngwa bụ ndakọrịta na akwụkwọ ọ bụla dị iche iche na akwụkwọ ọdịyo na anyị nwere ike ịchọta na ịntanetị. Nnukwu ndakọrịta ọ na-enye anyị, ọ ga-aka mma ebe ọ bụ na ọ ga-enye anyị ohere iji otu ngwa ọ bụghị nke dị iche maka ụdị usoro.
Offọdụ n'ime ngwa ndị anyị gosiri gị n'okpuru, gụnyere nkwado maka ihe karịrị ụdị 20 nke akwụkwọ, ngwa nke, ụfọdụ n’ime ha, chọrọ ịkwụ ụgwọ ọzọ nke doro anya na ọ bara uru ma ọ bụrụ na anyị na-agụ akwụkwọ ma ọ bụ ụdị akwụkwọ ọ bụla site na ama anyị.
1 Akwụkwọ Google Play
2 Ụdị ihe
3 FB Ọgụgụ
6 igbe igbe
7 Onye na -agụ akwụkwọ
8 Ọnwa + Reader
9 eReader ugwu
10 N'akpa uwe
Ọ bụrụ n’ịchọghị itinye ngwa ndị ọzọ iji gụọ akwụkwọ ọkacha mmasị gị ma ọ bụ gụọ ụmụ gị, ịnwere ike iji Akwụkwọ Google Play, ngwa Google n'asụsụ nke arụnyere na ngwụcha ngwanrọ gam akporo niile ruru ahịa.
Nke a ga-enye gị ohere mekọrịta ndetu niile na ị na-eme site na akaụntụ Google Drive ebe ị nwere ike ịchekwa akwụkwọ gị niile. Na mgbakwunye, site na ngwa ahụ n'onwe anyị anyị nwere ohere ị nweta katalọgụ nke ọtụtụ nde akwụkwọ.
N'ime nhọrọ nhazi, ngwa ahụ na-enye anyị ohere gbanwee nchapụta na agba ndabere, ọrụ dị mma ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịgụ tupu ị lakpuo ụra ma nwee ike ịrahụ ụra karịa. N'ịbụ ngwa Google, ọ dị maka nbudata n'efu.
Ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka akwụkwọ ntanetị, anyị ga-ekwu maka Amazon na ngwa Kindle. Kindle bụ ngwa Amazon maka ekwentị mkpanaaka nke anyị nwere ike iji gụọ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụdị akwụkwọ ọ bụla eletriki ruru aka anyị, ọ bụghị naanị ndị anyị nwere ike ịzụta na / ma ọ bụ budata site na ikpo okwu ya.
Ọ bụrụ na mgbakwunye na e-akwụkwọ na-agụ, ị nwere ike ịkekọrịta akwụkwọ site na ngwa a na mmekọrịta mmekọrịta n'etiti ngwaọrụ. Ngwa Kindle dị maka nbudata kpamkpam na ọ bụ otu n'ime nhọrọ kachasị mma dị ugbu a na ahịa.
Ọzọ nke kasị ngwa anyị nwere ike ịchọta na Storelọ Ahịa Play iji gụọ akwụkwọ elektrọnik n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụdị ọ bụla FB Reader, ngwa mepere emepe nke na - enye anyị ohere ịka akara ederede ma tinye ndetu.
FB Reader na-akwado usoro ePub, FB2, PDF, RTF, Kindle AZW3, DOC, HTML na TEXT. N'ime nhọrọ nhọrọ, ngwa ahụ na-enye anyị ohere ịhazi font anyị chọrọ iji, gbanwee ndabere nke akwụkwọ ahụ yana ọbụlagodi ọnọdụ gbara ọchịchịrị kachasị mma maka mgbe anyị na-agụ na ọkụ ọkụ dị ala.
Ngwa a dị maka gị budata n'efu ọ gụnyere mgbasa ozi mana enweghị ịzụrụ ihe n'ime ngwa iji tufuo ha. Dị ka Ọdịdị, site na iji ngwa a anyị nwere ike ịmekọrịta ọbá akwụkwọ anyị na ngwaọrụ ndị ọzọ site na Google Drive.
Developer: FBReader.ORG Nwere Oke
Ọ bụrụ n’ịchọghị ịmegharị ndụ gị na i copomi akwụkwọ na ngwaọrụ gị, ihe ngwọta nke OverDrive na-enye anyị bụ ihe ị na-achọ. OverDrive na-etinye n'aka anyị Enwere ike ịnweta ụlọ akwụkwọ karịrị 30.000 gburugburu ụwa 24 awa n'ụbọchị, ụbọchị asaa n'izu.
Ngwa ahụ na-enye anyị ohere mekọrịta ọdịnaya niile anyị na-ebudata na ọnọdụ anyị hụrụ ngwaọrụ ndị ọzọ. Iji jiri ọrụ a, ịchọrọ akaụntụ ọba akwụkwọ dị mma, usoro dị mfe nke ga-eme nleta dị mfe na nke na-enye anyị ohere ịgụ akwụkwọ ọ bụla biara na ahịa n'oge na-adịbeghị anya.
Aldico na-enye anyị ahụmịhe ị na-agụzi edebe dịka ị na-enye anyị ohere họrọ oke nke font, ọnụ na agba nke ederede Na mgbakwunye na imezi agba dị n’azụ, oke, oghere dị n’agbata ahịrị, ndọtị na nchapụta ihuenyo, yana inye ọnọdụ gbara ọchịchịrị.
Ngwa a dakọtara na usoro ePub na PDF ma nye anyị ohere hazie akwụkwọ site na aha mmado na ịnakọta. Ọ gụnyere njin ọchụchọ siri ike, akwụkwọ ọkọwa okwu na ohere ị ga-eji tinye katalọgụ OPDS nke gị. Ọ dakọtara na Android 4.0 na elu, enwere ike ibudata ya n'efu, gụnyere mgbasa ozi na ịzụrụ ihe n'ime ngwa.
Ọ bụrụ n’anyị jiri zụta ihe n’ime ngwa, anyị nwere ike gosi ya ma gosi ya ihe na faịlụ ePub, tinye wijetị n'ụlọ ihuenyo nke ama anyị ma wepu mgbasa ozi kpamkpam.
Aldiko Na -esote
Developer: Site na Marque
Eboox bụ otu n'ime ngwa ndị na-enye nyocha kacha mma n'ime Storelọ Ahịa Play na a Nkezi ọkwa nke kpakpando 4.8 n'ime 5 ga-ekwe omume yana ihe karịrị nyocha 130.000. Ngwa a dakọtara na usoro fb2, epub, moby na pdf n'etiti ndị ọzọ.
Ngwa dị maka gị budata n'efuỌ naghị agụnye mgbasa ozi mana ọ bụrụ na ịzụta na ngwà iji nwee ike ịnweta ọrụ niile nke ngwa ahụ na-enye anyị. Ọ gụnyere ọnọdụ abalị, interface ahụ dị mfe ma dịkwa mfe iji, ọ na-enye anyị ohere ịkwanye ọdịnaya dị na ngwa site na ihe nchọgharị weebụ, site na folda ọ bụla na ngwaọrụ mkpanaka anyị ma ọ bụ site na kaadị SD nke ngwaọrụ anyị.
Opekempe nke gam akporo chọrọ iji budata ma jiri Eboox bụ gam akporo 4.1
Onye na -agụ akwụkwọ
AllReader bụ ngwa ngwa n'efu na-enye anyị ohere ịgụ faịlụ na usoro ọ bụla fb2, fb3, fbz, txt, epub (no DRM), html, doc, docx, odt, rtf, mobi (no DRM)… Otu n’ime ihe na-adọrọ mmasị nke ngwa a bụ na ọ chọrọ gam akporo 2.3, yabụ ọ dị mma maka iji ya na ngwaọrụ ndị merela agadi, ọ bụ ezie na anyị agaghị enwe ike irite uru nke ọrụ niile ọ na-enye.
N'ime nhọrọ nhazi, ọ na-enye anyị ohere gbanwee ma font na font size, tinye ndabere na agba na ihe oyiyi, na-agụnye ọnọdụ gbara ọchịchịrị, gụnyere nkwado maka OPDS ... Nke kachasị mma, AlReader dị maka nbudata kpamkpam n'efu, anaghị agụnye mgbasa ozi ma ọ bụ ịzụrụ ihe n'ime ngwa. AlReader chọrọ gam akporo 2.3 ma ọ bụ mgbe e mesịrị.
AlReader - ọ bụla onye na-agụ akwụkwọ ederede
Developer: Alan. Mbaland
Ọnwa + Reader
Ọnwa + Reader dakọtara na usoro ndị ahụ EPUB, PDF, DJVU, AZW3, MOBI, FB2, PRC, CHM, CBZ, CBR, UMD, DOCX, ODT, RTF, TXT, HTML, MD (MarkDown), WEBP, RAR, ZIP ma ọ bụ OPDS, yabụ anyị agaghị enweghi nsogbu mgbe iguru akwukwo obula n’agbanyeghi usoro ya.
Nhọrọ nhazi ahụ na-enye anyị ohere gbanwee spacing n'etiti ahịrị, dịkwuo ma ọ bụ ibelata font size, gbanwee agba dị n’azụ, gụnyere isiokwu dị iche iche ehihie na abalị. Na mgbakwunye, ọ na-enye anyị ohere ịme ọchụchọ dị elu, tinye ibe edokọbara, gbanwee njikwa nchapụta site na iji otu aka, ọ na-enye anyị ohere ịgbakwunye nkọwa, chọọ ihe okwu dị na akwụkwọ ọkọwa okwu ma ọ bụ ntụgharị ha n'asụsụ Spanish ...
Ọnwa + Reader dị maka gị budata n'efu, gụnyere mgbasa ozi na ịzụrụ ihe n'ime ngwa iji wepụ mgbasa ozi ma nweta ọrụ niile nke ngwa a dị egwu na-enye anyị. Anyị nwekwara ike ịzụta ngwa ahụ na-enweghị mgbasa ozi yana agbachi ọrụ niile.
Developer: Ọnwa. +
Ọnwa + Reader Pro
eReader Prestigio na-enye anyị ohere ịnweta akwụkwọ elektrọnik na HTML, FB2, FB2.ZIP, TXT, PDF, epub, MOBI, epub3, djvu na akwụkwọ agụ. Na-enye anyị inweta ọba akwụkwọ nwere ihe karịrị akwụkwọ 50.000 na akwụkwọ ọdịyo. Ọ gụnyere ọnọdụ abalị, isiokwu dị iche iche iji hazie interface, gbanwee nha na usoro leta ...
Site na Google Drive na Dropbox anyị nwere ike imekọrịta ma ọdịnaya nke anyị chekwara na ngwaọrụ anyị yana mkpokọta anyị nwere ike ịmepụta. Gụnyere wijetị maka ihuenyo ụlọ na onye njikwa faịlụ nke ga-enyere anyị aka ịchọta faịlụ ahụ ngwa ngwa na akwụkwọ anyị na-edepụta na ngwaọrụ anyị.
eReader ugwu dị maka nbudata n'efu, gụnyere mgbasa ozi na ịzụrụ ihe n'ime ngwa nke na-enye anyị ohere iwepu mgbasa ozi ma nwee ohere ịnweta ọdịnaya niile na ngwa ahụ. Chọrọ gam akporo 4.1 ma ọ bụ karịa.
EReader ugwu: Reader
PocketBook abụghị naanị dakọtara na usoro akwụkwọ 19 (EPUB, FB2, PDF, MOBI, PDF, DJVU, DOCX, RTF, TXT, HTML n’etiti ndị ọzọ) mana kwa, ọ dakọtara na usoro CBR na CBZ (comics). Ọ na-akwadokwa akwụkwọ ọdịyo ma na-agbanwe akwụkwọ n'ime usoro ọdịyo site na engine TTS (Text to Speech).
Ngwa a na-enye anyị ohere mekọrịta ọdịnaya niile site na Google Drive na Dropbox, o dakọtara na katalọgụ ODPS ka anyị nwee ike ịnweta ọba akwụkwọ agbazinye akwụkwọ. N'ime ntọala ngwa, PocketBook na-enye anyị ohere ịgbanwe ọnọdụ nke bọtịnụ ahụ, gbanwee nha na font, ọ gụnyere wijetị maka ihuenyo ụlọ ...
Iji nwee ike ịnụ ụtọ nke a ngwa ngwa Na enweghị mgbasa ozi ma ọ bụ ịzụrụ ihe n'ime ngwa, gam akporo 4.1 ga-ejikwa ngwaọrụ anyị.
Akwụkwọ akpa ego
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Ngwa 10 kachasị mma iji gụọ akwụkwọ na gam akporo